Tartankii dugsiyada sare ee Puntland oo lasoo afmeeray iyo Alwaaxa oo ku guulaystay | Golis Telecom Somalia
Tartankii dugsiyada sare ee Puntland oo lasoo afmeeray iyo Alwaaxa oo ku guulaystay
Munaasbad lagu soo afmeerayay kadiska dugsiyada sare ee Puntland oo bishii barakaysnayd ee Ramadaan ka socnayay idaacadda daljir ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda Bariga Africa ee dagmada Qardho.
Tartan aqooneedkan oo lagu magacaabo Tartan iyo Tacliin ayaa waxaa kama dambaysta isugu soo haray labada dugsi ee ALazhar Qardho iyo Alwaaxa Garoowe kuwaas oo madasha lagu tartansiiyay islamarkaana ay guushu raacday dugsiga sare ee ALwaaxa Garoowe.
Xaflada waxaa kasoo qayb galay madaxda iyo maamulka sare ee Shirkadda Golis oo lahayd maalgalinta barnaamijka iyo masuuliyiin kale oo ay kamid ahaayeen maamulka gobalka karkaar, kan dagmada Qardho, xildhibaanno iyo dadwayne aad u farabadan.
Kuxigeenka Guddiga sare ee shirkadda Golis Luqmaan Xaaji Maxamuud oo xafladda kalmad ka jeediyay ayaa ugu horayn u hambaleyeeyay Labada dugsi ee kala galay kaalmaha 1aad iyo labaad waxa uuna xusay in ujeedka 1aad ee laga lahaa barnaamijka la gaaray kaas oo ahaa isdhexgal bulshada iyo dhalinyarada dalka iyo aqoon kororsi.
Intii ay xafladu shirkadda Golis ayaa uga farxiyay dadkii soo xaadiray munaasabadda hadiyado qaali ah oo ay kamid ahaayeen Moobeelo noocyadii ugu dambeeyay ah kuwaas oo lagu helayay hab bakhtiyaanasiib ah.
Gunnaanadkii xaflada ayaa abaalmarinadii ay mutaysteen la gudoonsiiyay ardayda dugsiyada sare ee Alwaaxa Garowe oo galay kaalinta 1aad iyo ALazhar Qardho oo galay kaalinta 2aad Nageeye Kalabayr oo galay kaalinta 3aad iyo Midigale oo isna ku guulaystay kaalinta anshaxa intii uu tartanku socday.
Waxaa xusid mudan in daladda waxbarashada ahliga ah ee Puntland iyo wasaaradda waxbarashada ay qayb ku lahaayeen maalingalinta barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee soosocday intii lagu guda jiray bishii barakaysnayd ee Ramadaan.
Gudoomiyaha Gobalka Karkaar C.qaadir Siciid Carshe Dhaqaaje oo soo xiray xaflada ayaa bogaadiyay sida uu kusoo dhamaaday kediskii dugsiyada sare ee Puntland oo finalkiisa sanadka martigalisay dagmada Qardho isagoo u mahadceliyay shirkadda Golis oo mudo badan maalgalinaysay barnaamijkan waxa uuna kula dardaarmay madaxda shirkadda inaysan ka daalin hawlaha noocan ah ee ay bulshadeeda ugala qayb qaadato danta guud oo ay kobcinta waxbarashadu ugu horayso.